ဂူဂဲလ်အပ်ပလီကေးရှင်းဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်စတင်စာမျက်နှာကိုတည်ဆောက်ပါ Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, သြဂုတ်လ 22, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဒီညငါအနားယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါပေမယ့်ငါနဲ့အတူ pizazz ထပ်ထည့်ချင်တယ် အလုပ်သစ်။ ဒါဟာငါနဲ့အတူအလုပ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့ငယ်လေးပါ။ ဒါပေမယ့်သူတို့ဟာသူတို့နည်းပညာတွေဘယ်လောက်ပွင့်လင်းတယ်ဆိုတာတော်တော်လေးအေးပါတယ်။ လင်းနို့ချက်ချင်းပင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျှဝေထားသည့်စာရွက်စာတမ်းများကို Google Docs သို့လွှဲပြောင်းလိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကမ်းလွန်သယံဇာတအနည်းငယ်လည်းရှိသည့်အတွက်အလွန်ကောင်းသည်။ အခုငါတို့နောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံမှုများနှင့်အတူတူညီတဲ့စာရွက်စာတမ်းရှိသည် - အများကြီးပိုထိရောက်။
ကျွန်တော့်ဘီလ်၏သူငယ်ချင်းကကျွန်ုပ်ဘာကြောင့်မချိုးဖောက်ရကြောင်းမေးမြန်းခဲ့သည် Google Apps ကပ။ သူက Dale ကိုသူမဇနီး၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထူထောင်ရန်အသုံးပြုခဲ့ပြီးသူတို့ချစ်ကြသည်ကိုသူပြောခဲ့သည်။ ဒီတော့ဒီညညငါနဲ့အတူကစားနေတယ်။ ၎င်းသည်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသော်လည်း၎င်းသည်အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်ဆက်လက်လေ့လာပါမည်။
ငါသော်လည်းယနေ့ညတကယ်ကိုအေးမြအင်္ဂါရပ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေ။ ဂူဂဲလ်အပလီကေးရှင်းသည်သင့်အားစိတ်ကြိုက် Start Page ကိုတည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုပြီး၎င်းကိုပင်ပေးသည် DNS ကို သင်၏ site ထဲကိုသင်ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ချင်သောအခြေအနေရှိချိန်ညှိချက်များ! ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် http://start.yoursite.com စာမျက်နှာကိုလုပ်နိုင်သည်။ ဒီညငါ Patronpath Start Page ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။
ဘုံပြက္ခဒိန်၊ ဒေသတွင်းရာသီဥတုနှင့်အမျိုးသားစားသောက်ဆိုင်များအသင်းတို့ပါ ၀ င်သည့်ဘယ်ဘက်ကော်လံတွင်သော့ခတ်ထားသည့်အကြောင်းအရာများ!
လက်ျာကော်လံ ၂ ခုသည်လူတစ် ဦး စီနှစ်သက်သလိုပဲစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည် iGoogle.
၎င်းသည်ကြီးမားသည်သို့မဟုတ် splashy မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်မိနစ်အနည်းငယ်အတွက်အခမဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြင့်ကစားခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။
27:2007 pm တွင်သြဂုတ်လ 9, 41
အေးတယ်နော်။ ငါလအနည်းငယ်စုံတွဲဤအရာ setup ကို🙂
စက်တင်ဘာ 10, 2007 မှာ 10: 03 AM
ဘယ်သူ့ကိုမှ pageflakes (သို့) netvibes တွေကိုအကြံပေးချင်ပါတယ် ငါ pageflakes ကိုသုံးပြီးအီးမေးလ်လိပ်စာများစွာကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးဘလော့ဂ် ၃၀ လောက်ကိုစာရင်းသွင်းတယ်။ အဲဒါကိုစူပါလွယ်ကူစေသည်!